Catégorie : actu_Antananarivo
Nitsidika ara-pomba fifanajana ny Filohan’ny Antenimierandoholona RAZAFIMAHEFA Herimanana, teto amin’ny Lapan’Anosikely, ny Ambasadaoro vaovaon’i Rosia miasa sy monina eto Madagasikara SEM ANDREEV Andrey VLADIMIROVICH, ny Zoma 23 Aprily 2021.
Nivoitra nandritra ny fihaonana ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin’ny Antenimierandoholona sy ny « Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie ». Teo ihany koa ny fanatsarana ny fifandraisana eo amin’ny lafiny ara-diplômatika sy ara-toe-karena. Nanamafy ny fahavononany amin’ny fanomezan-tànana an’i Madagasikara entina hiatrehana izao ady atao amin’ny valan’aretina COVID-19 izao moa ny Firenena Rosianina.
Mahakasika ny fitsidiham-paritra izay ataon’ny eto anivon’ny Antenimierandoholona dia nanamafy ny Filohan’ny Antenimierandoholona fa hotohizina ny fitsidihana ka ny Faritra Vakinakaratra indray no hotsidihana manaraka. Izany no natao mba hankaherezana ireo tratran’ny valan’aretina sy ireo mpitsabo ary nohamafisiny fa andraikitr’ity Andrimpanjakana ity ny mijery izay lesoka eny anivon’ireny toeram-pitsaboana ireny ka manao tatitra amin’ny Governemanta mba hitadiavana vahaolana mifanaraka amin’izany.
Posted in actu_Antananarivo, ACTUALITE	Leave a comment
Nanatanteraka fitsidihana tany amin’ny Faritra Itasy ny Filohan’ny Antenimierandoholona Andriamatoa RAZAFIMAHEFA Herimanana, ary nampahery ireo marary rehetra indrindra ny tratrin’ny Covid 19.
Voatsidika tamin’izany ny Tobi-pitsaboana miisa roa (02), Miarinarivo sy Soavinandriana, ka toy izao ny toromarika nomeny :
– Tsy maintsy arahina ny toromarika rehetra nomen’ny Filoham-pirenena Andry Nirina RAJOELINA
– Ilaina ny firaisankinan’ny mpitsabo sy ny Fitondrana
– Arahina maso akaiky ireo marary mitsabo tena any an-tranony, mba tsy iparitahin’ny aretina
– Manampy antsika ny Firenena avy any ivelany, fa ny Governemanta no mamatsy ny fanafody ho an’ireo Hopitaly rehetra
– Mila matanja-tsaina ireo marary rehetra miatrika izany aretina Covid 19 izany, atao ambony tsara ny moraly
– Ny fisian’ny barazy dia ahafahana mifehy ny aretina izay efa mihanaka tokoa ao Antananarivo Renivohitra ka tokony hisy ny fifandeferana
Notsindriny manokana tamin’izany fanambarany izany fa raha vao misy fambara na tranga mampiahiahy dia tokony hanantona toeram-pitsaboana avy hatrany.
Isaorana manokana ny Ministeran’ny Indostria sy ny Varotra ary ny Asa tànana (M.I.C.A.) sy ireo mpandraharaha nahafoy fanolorana nahafahana nitondra tolo-tànana.
Ny Filohan’ny Antenimierandoholona sy ireo mpiara-miasa aminy akaiky ihany koa dia nanolotra solon-dranom-boankazo ho an’ireo marary.
18Avr 26 avril 2021
« Amin’alahelo lehibe no nandrenesanay ny fahalasanan’i Jeneraly RASOLOSOA Dolin. Very Olomanga ny Firenena amin’izao fodiamandriny izao. Fony fahavelony dia nitàna andraikitra lehibe teto amin’ny Firenena izy. Ary nisahana ny fitantanana ny Filan-kevitra Ambonin’ny Tetezamita (CST) tamin’ny andron’ny Tetezamita.
Ny Filoha, ny Birao Maharitra, ny Loholon’i Madagasikara, ny Fianakaviamben’ny Antenimierandoholona dia maneho etoana ny fiaraha-miory ary mankahery ny Fianakaviana amin’izao fahalasanan’Itompokolahy izao.
Mankahery ihany koa ny Tafika Malagasy. »
Posted in actu_Antananarivo, actu_Fianarantsoa, ACTUALITE	Leave a comment
Hopitaly Anosiala: Nanolotra Equipements de Protection Individuelle (EPI) ho an’ireo Mpitsabo ny Loholon’i Madagasikara RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana.
Nanolotra Equipements de Protection Individuelle (EPI) ho an’ireo Mpitsabo teny amin’ny Hopitaly Anosiala ny Loholon’i Madagasikara RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana
Androany 14 aprily 2021 dia tonga nitondra sy nanolotra Fanamiana manokana ho fiarovan-tena na « Equipements de Protection Individuelle (EPI) » hoan’ireo Mpitsabo sy Mpitsabo mpanampy ary ireo mpiasa mpikarakara rehetra eo anivon’ity Hopitaly Anosiala ity ny Loholon’i Madagasikara RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana sy ny vadiny ary ireo mpiara miasa aminy akaiky.
– Aro tanana 2000 isa
– Aro vava orona 4500 isa
– Aro tongotra 1000 isa
– Aro loha 1500 isa
– Aro akanjo 100 isa
– Gels désinfectant 2 Bidons de 5 litres no natolotra tamin’izany.
Izao no natao hoy ity Loholon’i Madagasikara ity dia mba hifanampiana sy hifampitsimbinana eo amin’ny samy Malagasy, satria ny Antenimierandoholona rahateo no Andrimpanjakana misolo tena mivantana ireo Vondrombahoaka Itsinjaram-pahefana manerana ny Nosy, koa rariny raha mifanampy isika samy malagasy araka ilay oham-pitenenana hoe : « Tsy misy manana ny ampy, fa sambatra izay mifanampy ».
Mandalo vanim-potoana sarotra ankehitriny ny Vahoaka Malagasy noho ny firongatry ny valan’aretina COVID 19 eto amintsika, indrindra fa ny ao amin’ny Distrikan’Ambohidratrimo raha ny eto Antananarivo no jerena izay sady toerana misy ny Hopitaly Anosiala ka itsaboana ireo marary efa manana ny « forme grave » eo amin’ity aretina COVID 19 ity.
Nankasitraka sy nisaotra ny Loholon’i Madagasikara RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana mivady ny Talen’ny Hopitaly Anosiala RAZAFIMAHATRATRA Rado izay nisolotena ny mpiasa sy ny Tompon’andraikitra rehetra eo anivon’ity Hopitaly ity, noho izao ezaka lehibe nataon’ny Loholona izao ho fifampitsimbinanan eo amin’ny samy Malagasy amin’ity ady itambarana ity.
08Avr 9 avril 2021
Lanonam-pianianan’ireo mpikambana vaovao ao amin’ny Fitsarana avo momba ny Lalam-panorenana.
Notanterahina androany alakamisy 08 aprily 2021 tetsy amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana Ambohidahy ny lanonam-pianianan’ireo mpikambana vaovao ao amin’izany Andrimpanjakana izany, izay natrehin’ny Filohampirenena Malagasy Andry Nirina RAJOELINA, ny Filohan’ny Antenimierandoholona RAZAFIMAHEFA Herimanana, ny Filohan’ny Antenimierampirenena Christine RAZANAMAHASOA, ny Praiministra lehiben’ny Governemanta NTSAY Christian ary ireo olo-manan-kaja sivily sy miaramila maro hafa.
Nandritra io fotoana io ihany koa no nanaovana ny famindram-pahefana ara-demokratika teo amin’ireo mpikambana teo aloha sy ireo mpikambana vaovao izay sambany nisy tamin’izany Andrimpanjakana izany.
Marihina moa fa sivy mianadahy izy ireo no mpikambana ao amin’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana dimy ny vehivavy ary efatra ny lehilahy. Fito taona tsy azo ivalozana ny fepotoam-piasan’izy ireo.